Faahfaahintii ugu dambeysay rasaastii dhex martay ciidamada Puntland iyo maleeshiyadii markabka heysatay - Caasimada Online
Home Warar Faahfaahintii ugu dambeysay rasaastii dhex martay ciidamada Puntland iyo maleeshiyadii markabka heysatay
Faahfaahintii ugu dambeysay rasaastii dhex martay ciidamada Puntland iyo maleeshiyadii markabka heysatay
Garoowe (Caasimada Online) – Wararka hadda soo gaarayo Caasimadda Online ayaa sheegayo inay is rasaaseyn ka dhex bilaabatay ciidamadii Puntland ee wajahay Degmda Caluula ee Gobolka Bari iyo ciidamadii heystay markabka lasoo af duubay.
Markaas oo lagu magacaabo ARIS 13 ayaa la geeyey Caluula, waxayna dalbadeyn maleeshayada heysato madax furasho lacageed oo aan tiradeeda lagu dhawaaqin, waxaana halkaas dhawaan gaaray ciidamada hadda la dagaalamay.
Wararka ayaa sheegayo in Dagaalka oo Muddo Kooban socday ay rasaas is weedaarsadeen Ciidamadda miriiniska iyo Kooxda Dhalinyarada ah ee Markabka Heysta, Sida uu xaqiijiyay Gudoomiyaha Degmada Caluula oo la hadlay saxaafadda.
Waxyaalo badan ayaa lasoo sheegayaa inay soo gaartay ciidamada Puntland ee weerarka qaaday marki iska caabin xoog leh kala kulmeyn kooxda heysato markabka, waxayna wararkii ugu dambeyey sheegayaan inay hadda istaagtay rasaasta.
Dadka deegaanka ayaa tan iyo shalay muujinayay cabsi ku aadan in dagaal uu degmada ku dhexmaro ciidamada Puntland iyo dhalinyarada heysata markabka lasoo afduubtay .
Caasimadda online ayaad kala socon doontaa waxyaabaha kusoo kordha weerarka ay ciidamada Puntland ku qaadeyn Maleeshiyada heysato markabka.